Cameron.....: May 2021
ကဆုန်လပြည့် (၅) နေ့
(၁) ဗျာဒိတ်ယူသည့်နေ့ = လေး သင်္ချေကမ္ဘာတစ်သိန်း အစ ကဆုန်လပြည့်နေ့။
(၂) ဘုရားမွေးသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် - ၆၈၊ ကဆုန်လပြည့်။ (သောကြာနေ့)
(၃) ဘုရားဖြစ်သည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၀၃၊ ကဆုန်လပြည့် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
(၄) ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်းဟောသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၀၄၊ ကဆုန်လပြည့်။
(၅) ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၄၈၊ ကဆုန်လပြည့် ။ (အင်္ဂါနေ့)
# Retoch ( Kosone)
# `` ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့. ´´
# ဆု . ဖွား . ပွင့် .စံ ဤလေးတန်
မှတ်ရန် ကဆုန်လပြည့်နေ့ ´´
နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးတစ်နေ့ ဖြစ်ပါတယ် ။
(၁) " ဆု "
ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာမှ လေးဆူမြှောက် ဂေါတမဘုရား စစ်စစ်
ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ် ။
(၂) " ဖွား "
ဂေါတမဘုရား အလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားလေး
မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့နေ့ဟာလည်း မဟာသက္ကရာဇ်( ၆၈)ခု
(၃) " ပွင့် "
ဂေါတမဘုရားအလောင်း ဗောဓိပင်အောက်မှာ ဘုရား
ဖြစ်တဲ့နေ့လည်း မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃) ခု ၊
ကဆုန်လပြည့်နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
(၄) " စံ "
မဟာသက္ကရာဇ် (၁၄၈)ခု ၊ကဆုန်လပြည့်နေ့သာ
ဒါန ၊ သီလ ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်တရားများကို
ပွားများလာအောင် အားထုတ်နိ ုင်ကြပါစေ။
၁။ ကဆုန်လပြည့်နေ့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ကဆုန်လပြည့် နေ့၏ထူးခြားချက်မှာ(ဗျာဒိတ်၊ ဖွားမြင၊် ဗောဓိပင်၊ စံဝင် နိဗ္ဗာန်နန်း)ဆိုသည်နှင့်အညီ သုံးလောကထွတ်ထား သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားနှင့်စပ်၍-
ဤထူးခြားချက်လေးမျိုးတို့နှင့်တိုက်ဆိုင်နေပါသည်။ဤကဲ့သို့ ထူးခြားချက်လေးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့် ဤနေ့ကို "ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ "ဟုအမွှန်းတင်ခေါ်ဆိုကြပါသည်။
၂။ ဤကဆုန်လပြည့်နေ့တွင်မာရ်နတ်ရန်ကိုအောင်မြင်တော်မူသောကြောင့် ဤနေ့ကို "ကဆုန်လပြည့်မာန်အောင်နေ့" အဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏စိတ်အစဉ်တွင်စွဲမြဲ၍နေကြပါသည်။
ပရတ်နိဗ္ဗာန်စံတော်မူခြင်းများကိုအကြောင်းပြ၍ ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို "ဝိဆခ်ဒေး"ဟုခေါ်ကြပါသည်။ ဝိသာခါဒေးဟုဆိုလိုပါသည်။
၄။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် ဘုရားဖြစ်သောနေ့ထူးနေ့မြတ်ကိုအာရုံပြု၍ ကဆုန်လပြည့်နေ့၌ ပရိဘောဂစေတီထိုက်သော ဗောဓိပင်ကိုရေသွန်းလောင်းလေ့ရှိကြပါသည်။
၅။ ဗောဓိပင်သည်သဗ္ဗုညုတဥာဏ်တော်ကိုရ၍ ဘုရားဖြစ်တော်မူရာဌာနဖြစ်ခြင်း၊ ဖွားဖတ်တော်၇ပါးတွင်စာရင်းဝင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ထူးခြားသောသစ်ပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်၍ ဗောဓိပင်၌ရေသွန်းလောင်းခြင်းအစဉ်အလာကို ခေတ်အဆက်ဆက်ပြုလုပ်လာခဲ့ကြပါသည်။
၆။ မြန်မာ့ရိုးရာဆယ့်နှစ်ရာသီပွဲတော်များအနက် ကဆုန်လ ၌ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကို ရိုးရာပွဲတော်အဖြစ် အစဉ်အလာသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။
၇။ အသနဗောဓိယမထေရ်၏ အလောင်းသည် တိဿဘုရားရှင်၏ ဗောဓ်ိပင်ကိုစိုက်ပျိုးပူဇော်ရသော ကုသိုလ်ကြောင့် နတ်ပြည်၌နတ်ဖြစ်ရခြင်း၊ စကြာမင်းဖြစ်ရခြင်း၊ အပါယ်လေးပါးမှလွတ်ကင်းရခြင်းအကျိုးများကို ခံစားရကြောင်း (ထေရာပဒါန်)ကျမ်းဂန်၌ဟောကြားထားပါသည်။
၈။ ဂန္ဓောဒကတိဿမထေရ်၏ အလောင်းသည် ပဒုမုတ္တရဘုရားရှင်၏ ဗောဓိပင်ကိုနံ့သာရေဖြင့် သွန်းလောင်းသောကုသိုလ်ကြောင့် နတ်ပြည့်၌ဖြစ်ရခြင်း၊ အနာရောဂါမဖြစ်ခြင်း၊ သောကကင်းဝေးခြင်း၊ စသောအကျိုးများကိုခံစားရပါသည်။
၉။ အထက်ပါအကြောင်းအရာများကိုနှလုံးသွင်း၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေဖြင့် နှစ်စဉ်နှစ်စဉ် "ကဆုန်လပြည့်နေ့"ရောက်တိုင်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ဥဒ္ဒိဿစေတီတော်များကို အနေကဇာတင် ဗုဒ္ဓအဘိသေက မင်္ဂလာသဘင် ဆင်ယင်ကျင်းပ၍ ကုသိုလ်အထူးကို ဆည်းပူးလေ့ရှိကြပါသည်၊ ကျောင်းကန်ဘုရားသို့သွား၍ ဒါန သီလ ဘာဝနာ အမူ့ကိုပြုလုပ်၍ "ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ကိုအမှတ်တရဆင်နွှဲကြပါသည်။
ကုဆုန်လပြည့်နေ့ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အကြောင်းကို သိစေရန်အတွက် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးပြီး ဘုရားရှင်ကို ပူဇော်သက္ကာရ ပြုလိုက်ရပါတယ်။
ကဆန်ုလပြည့်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးတစ်နေ့ဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့-
(၁) ဘုရားအလောင်းတော် ရသေ့သုမေဓာဟာ ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာမှ လေးဆူမြောက် ဂေါတမဘုရားစင်စစ် ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားထံ နိယတဗျာဒိတ်ခံယူတဲ့နေ့ဟာ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။
(၂) ဂေါတမဘုရားအလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားလေး မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့နေ့လဲ မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ ခု၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။
(၃) ဂေါတမဘုရားအလောင်း ဗောဓိပင်အောက်မှာ ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့လဲ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃) ခု ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။
(၄) ဂေါတမဘုရား ပရိနှိဗ္ဗာန်စံတဲ့ နေ့ဟာလဲ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ ခု ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်ပြန်တယ်။
ဒါကြောင့် ကဆုန်လပြည့်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် အင်မတန် ထူးမြတ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပါ။
ကဆုန်လဟာ မြန်မာလ ၁၂ ရာသီမှာ ဒုတိယလဖြစ်ပြီး ဗြိဿရာသီနှင့်တူသည်။ ပုဂံခေတ်ကျောက်စာမှာ ကဆုန်လကို “ကုဆုန်” လို့အရေးများတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ “ကု” မှ “က”သို့ ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ ဆိုတယ်။ (ကုက)ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “ရေ” ဖြစ်ကာ “ဆုန်” တော့ သွန်းလောင်းတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိလို့ ကဆုန်လကို “ရေသွန်းလ” (သို့မဟုတ်) “ရေလောင်းလ” လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ
ပါဠိစာပေမှာ ကဆုန်လကို “ဝေသာခ” Vesaka လို့ခေါ်ပြီး အဲဒီ ဝေသာခ ကနေ ပါဌ်ပျက်ကာ “ဝေသခ်” Vesak ဖြစ်လာတယ်။ သီဟိုအသံထွက်ကတော့ ဝေဆတ်ခ် လို့ ထွက်ပြီး အနောက်နိုင်ငံသားများကလည်း သီဟိုသံကို အမှီပြုကာ ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို ဝေဆတ်ခ်ဒေး Vesak Day လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို “ဝိဆာခပူချား” (ဝိသာခပူဇာ) လို့ခေါ်သတဲ့။
မြန်မာပြည်မှ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့
ကဆုန်လပြည့်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အထွတ်အမြတ်နေ့ဖြစ်လို့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်အဖြစ် ထင်ရှားတဲ့ ဘာသာရေးပွဲကို ဆင်နွှဲတယ်။ ကဆုန်လရာသီဟာ နေအရှိန် အပြင်းအထန်ဆုံးဖြစ်လို့ ရေတွေ ခန်းချောက်လေ့ရှိတယ်။ ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ ဗောဓိပင်ကို ရည်မှတ်ကာ ဗောဓိပင်အပွားတော်များကို တပျော်တပါး ရေစင်သွန်းလောင်းကြလို့ “ကဆုန်လ ညောင်ရေသွန်းပွဲ” လို့ ခေါ်လာကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ဗောဓိပင်ဟာ ဘုရားရှင်အား
ပရိဘောဂစေတီတော်ဖြစ်လို့ ဗောဓိပင်ကို ရေလောင်းပေးခြင်းဟာ ဗောဓိပင် ပိုမိုရှင်သန်စေဖို့ ဘုရားသာသနာတော် ဆက်လက် အဓွန့်ရှည်စေဖို့ ဖေါ်ညွှန်းပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတို့ဟာ ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာ သံဃာတော်များအား အရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်း၊ သီလခံယူခြင်း၊ ပရိတ်တရားတော် တရားတော်များ နာကြားခြင်း၊ ဘာဝနာတရား ပွားများခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ဇိဝိတဒါန ငါးလွှတ်ပွဲ၊ ငှက်လွှတ်ပွဲ၊ တိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့လွှတ်ပွဲ တွေကိုလည်း တပျော်တပါး ကျင်းပကြတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဇင်းမယ်မှာ ကျင်းပတဲ့ ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ (ဝိဆာခပူးချား)
ထိုင်းနိုင်ငံ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့
ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ဖြစ်လို့ ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဘုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လို့ ဘုရင်နဲ့တကွ ဘုရင့်ဆွေတော်မျိုးတော် အပါအဝင် အရာရှိအရာခံများအားလုံး ကဆုန်လပြည့်နေ့ အခမ်းအနားဖြစ်တဲ့ “ဝိဆာခပူးချား” ကို တပြည်လုံး ပါဝင်ဆင်နွှဲကြတယ်။ ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာ သာသနာ့အလံတော်များသည် ထိုင်းနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးမှာ တလူလူလွှင့်ထူကြတယ်။ (ထိုင်းနိုင်ငံသာသနာ့အလံဟာ မြန်မာနဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံလို ရောင်ခြည်တော် ခြောက်သွယ် မဟုတ်ဘဲ အရဟတ္တဓဇ သင်္ကန်းရောင်ပေါ် တွင် ဓမ္မစကြာ စက်ဝိုင်းပုံ တပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။)။
Posted by Cameron at 20:20 No comments:
Long Time No See.......☕️
ကျောလည်လောက်ရှည်တဲ့ မျက်နှာတစ်ခြမ်းအုပ်လုနီးပါး အညိုရင့်ရောင် ဆံနွယ်တွေကို သူတခါတခါ စကားပြောလို့ သပ်တင်လိုက်တဲ့အချိန် ကျွန်တော် သတိလက်လွတ် ငေးမောသွားရလောက်တဲ့အထိ.....။ ခုတော့လည်း လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဆုံတုန်းက ဆံပင်တွေကို အပြောင်သိမ်းပြီးစည်းထားတဲ့ ခပ်ရွတ်ရွတ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တော့သလိုပဲ....။
ကျွန်တော် အအေးဖန်ခွက်က ရေခဲရေသီးနေတာကို လက်နဲ့သပ်ရင်း သူ့ရှေ့မှာ သူ့အကြောင်းတွေးပြီး ပြုံးနေမိတယ်...။
"ဒီမှာ မင်းဘာတွေတွေးပြီး ပြုံးစစ ဖြစ်နေတာလဲ..."
သူစကားလှမ်းပြောတော့မှ ကိုယ့်အတွေးထဲကကိုယ်လန့်နိုးလာပြီး အယောင်ယောင်အမှားမှားနဲ့ ဘေးနားက မဆီမဆိုင် ကားသော့နဲ့ Air Pod တွေကို လက်နဲ့တိုက်မိပြီး အောက်ပြုတ်ကျကုန်တော့တယ်....။ သူလည်းထိုင်ရာက ကျွန်တော့်ကို ပြုတ်ကျသွားတဲ့ ပစ္စည်းလိုက်ကူကောက်ပေးတယ်....။ ဖိနပ်ပါးလေးစီးထားတဲ့ သူ့ခြေချောင်းလေးတွေက သွယ်လျလျနဲ့ လှတဲ့ခြေထောက်ပိုင်ရှင်လို့ မှတ်ချက်ချမိရင်း ကျွန်တော့်ဆီမှာ တစ်လနီးပါးလောက်ရောက်နေတဲ့ သူ့ဖိနပ်ကို မြင်ယောင်လိုက်မိတယ်...။
"ရပါတယ်...ဘာလို့ဆောရီးပြောတာလဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တိုက်မိလို့ ပြုတ်ကျတာပဲ..."
"မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ ဆောရီးက ကျွန်တော့်ဆီပါသွားတဲ့ ခင်ဗျားအထုပ်ထဲက ပစ္စည်းကို ထုတ်ကြည့်မိခဲ့တယ်...."
"ခင်ဗျားခြေထောက်နဲ့ဆို တော်တော်လိုက်မှာပဲ အဲဖိနပ်လေးနဲ့"
"မြှောက်ပြောစရာမလိုပါဘူး ကိုယ်မင်းကို အအေးတိုက်ထားပါတယ် ဘာမုန့်ထပ်စားဦးမလဲ..."
"ဟာ...ရပြီ ကျွန်တော် နေ့လည်စာ စားခဲ့ပြီးပြီ"
"တော်သေးတာပေါ့ မင်းနဲ့အဲဒီအထုပ်ပါသွားတာ ဖုန်းနံပါတ်လဲမတောင်းထားမိတော့ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမှန်းမသိဘူး ပြန်မရတော့ဘူးလို့တောင်ထင်ထားတာ..."
"ကျွန်တော် ခင်ဗျားဖုန်းနံပါတ်ကို ခိုးရိုက်ထားမိတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ်...."
"အေးလေ ဒါနဲ့ ဘာကိစ္စ ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖုန်းနဲ့ခိုးရိုက်ထားရတာလဲ..."
"ခင်ဗျားပဲ ကျွန်တော့်ကို မမြင်မြင်အောင်ပြထားတာမဟုတ်လား..."
ကျွန်တော်အဲလိုပြောတော့ သူကစကားလမ်းကြောင်းလွဲပြီး ထပြေးပါလေရော.....။
"တော်ပြီ မင်းလဲအအေးသောက်ပြီးပြီမဟုတ်လား ပြန်တော့မယ် ကိုယ်လဲ ဖိနပ်ပြန်ရပြီဆိုတော့..."
သူကချက်ချင်း ဖိနပ်အိတ်ကို ကိုင်ပြီး ဆိုင်ထဲကထွက်သွားတော့ ကျွန်တော် သူ့နောက်ပြေးလိုက်ရသေးတယ်...။ သူ့ကို နောက်တစ်ခုပေးဖို့ကျန်သေးလို့....။
"နေဦး ..ဘာလို့ အတင်းထွက်ပြေးတာလဲ...ခနလေး ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို ‌ပေးစရာတစ်ခုကျန်သေးလို့ ကားထဲသွားယူလိုက်ဦးမယ်..."
သူက ကျွန်တော့်နောက်ကနေ ကျွန်တော့်ကားရပ်ထားတဲ့နားအထိ လိုက်လာရှာတယ်....။
"ဟွန့် ...😒ဘာများလဲလို့ ..... Lollipop 🍭 မင်းက ခုထိ ကလေးသကြားလုံးတွေကိုစားတုန်းလား..."
"ဟာ ဘယ်သူပြောလဲ Lollipop စားတာခုခေတ် လူငယ်တွေအတွက် စတိုင်လ်ဗျ ခင်ဗျားက ဘယ်ရောက်နေလို့ ခေတ်နဲ့အဆက်ပြတ်နေရတာလဲ..."
"ခုမှ ရှက်မနေပါနဲ့ ကလေးမို့လို့ ကလေးမုန့်စားတာပေါ့.... ကျေးဇူးပဲ ကိုယ်လဲ Lollipop ကြိုက်တတ်နေပါပြီ.." လို့ပြောပြီး ကျွန်တော့်ကို နှုတ်တောင်မဆက်ဘဲ ချာခနဲလှည့်ထွက်သွားတာ...။ မသိရင် ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးတစ်ယောက်လိုပဲ... အနက်ရောင် ဂါဝန်ကားကားကို slipper ကွင်းထိုးလေးနဲ့ ဆံပင်လေးတွေကို ခါပြီးထွက်သွားတဲ့ သူ့နောက်ကျောကို ကျွန်တော် ငေးကျန်ရစ်ခဲ့တယ်...။
လေယာဉ်နေရာချတော့ ခရီးသည်တွေက ခုံနံပါတ်ကို အစဉ်လိုက်မရကြ တကွဲတပြားတွေထိုင်ရတာ အတူထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်မပြေဖြစ်ရော...။ အဲနေ့က ကျွန်တော်က ပြူတင်းပေါက်ဘေးနားမှာနေရာရတယ်...။ ကျွန်တော့်ဘေးနားအလယ်ခုံက အန်ကယ်ကြီးရဲ့ အမျိုးသမီးနေရာရတာက အန်ကယ်ကြီးရဲ့ အနောက်မှာ....။ အဲဒါ သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ထိုင်ချင်တော့ ခုံချင်းလဲချင်တယ် အဲမှာ သူနဲ့ကျွန်တော်စတွေ့ကြတာ....။ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနဲ့ ထိုင်ရမလို ထရမလိုဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို "ဒီမှာလာထိုင်လိုက်လေ..."လို့ ကျွန်တော်လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်....။ သူလဲ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ အန်ကယ်ကြီးနဲ့ ခုံချင်းလဲပြီး ကျွန်တော့်နားရောက်လာခဲ့တယ်.....။ ကျွန်တော်တို့ လေယာဉ်စတက်ပြီး‌တော်တော်ကြာကြာအထိ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားမပြောဖြစ်ကြဘူး....။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဖြည့်ရမယ့်ကပ်တွေဖြည့်တော့ သူ့ဘေးနားက ယောက်ျားတစ်ယောက်က မဖြည့်တတ်လို့ သူကူဖြည့်ပေးနေလိုက်သေးတယ်....။
တိမ်တွေထူလို့ လေယာဉ်က အောက်ကျလိုက် ပြန်တက်လိုက်ဖြစ်တော့ သူခေါင်းမူးလာတာထင်တယ် မျက်နှာမအီမသာနဲ့....။ အဲမှာ ကျွန်တော့်သူ့ကို စကားစဖို့ လမ်းကြောင်းရသွားခဲ့တယ်....။
"နောက်မှီထားပါလား အချိုတစ်ခုခုစားမှထင်တယ် ကျွန်တော့်မှာ သကြားလုံးပါတယ်...."
ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ မျက်လုံးစုံမှိတ်ထားတဲ့ သူ့ကို အိတ်ထဲက Lollipop ချောင်းလေးတစ်ခု ထုတ်ပေးလိုက်တယ်....။
"ရော့ ဒါလေးစားလိုက်ရင် အမူးပြေမယ်ထင်တယ်...."
ကျွန်တော်က တခါတည်းအခွံခွာပြီး သူ့ကိုကျွေးတော့ သူက မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ကိုင်ထားတဲ့ Lollipop ကိုလဲမြင်ရော....
"မရှိဘူး ဒါပဲစား ချေးမများနဲ့ ခုသက်သာဖို့အရေးကြီးတာ..." လို့ ခပ်ဟောက်ဟောက် ဒါပေမယ့် လေသံပျော့နဲ့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်....။
"အင်းပါ ပေးပေး ဒါပဲစားမယ်...." လို့ သူ့ဆီက စိတ်မရှည်တဲ့လေသံနဲ့အတူ ကျွန်တော့်လက်ထဲက lollipop ကို ဆတ်ခနဲယူလိုက်တယ်....။
မျက်နှာနွမ်းနေပေမယ့် စတွေ့လိုက်ကတည်းက သတိထားမိတဲ့ အညိုရင့်ရင့်မျက်ဝန်းတစ်စုံက တောက်ပလင်းလက်....။ lollipop ကို မစားချင်စားချင်နဲ့ စိတ်မရှည်တဲ့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ရယ်လဲရယ်ချင်သွားသလို တပြိုင်နက်ထဲ ရင်ဘတ်ထဲက လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခုကို ရလိုက်တယ်...။ အဲဒီခံစားမှုကို အဲတုန်းက ကျွန်တော် ရေရေရာရာနားမလည်ခဲ့ဘူး.....။
ခပ်လွင့်လွင့်ရွေ့လျားသွားနေတဲ့ အနက်ရောင်လေးကို ကျွန်တော်ငေးမောရင်း သူကလမ်းထိပ်ရောက်တော့ ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး ကားနားမှာ မှီရပ်ကျန်နေသေးတဲ့ ကျွန်တော့်ကို သွားတော့လေဆိုတဲ့ အထှာနဲ့လက်ပြလိုက်သေးတယ်....။
ကျွန်တော်ကားစက်နှိုးပြီး ထွက်ခါနီးတော့ မက်ဆေ့လေးတစ်ခုတက်လာခဲ့တယ်....။
"ကားကို ဂရုစိုက်မောင်း ကားမောင်းရင်းဖုန်းမသုံးနဲ့ဦး ဖိနပ်ပြန်လာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးထပ်တင်တယ်နော် lollipop လေး..." တဲ့.... 😊
"သယ်စရာတွေကများလိုက်တာ ပေးပေး ကျွန်တော်တစ်ခုကူသယ်ပေးမယ်...."
"ရပါတယ် ပေါ့ပေါ့လေးတွေပါပဲ အထုပ်တွေများနေလို့သာ..."
ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနဲ့ လက်မှာလည်း လက်ဆွဲထုပ်နှစ်ထုပ်နဲ့မို့ ကျွန်တော်သူ့အိတ်တစ်လုံးကူသယ်ပေးခဲ့တယ်...။ check in ဝင်ပြီး ကားငှားတော့ သူ Grab ငှားတာကို ကူစောင့်ပေးရင်း သူကားပေါ်တက်သွားတော့ ကျွန်တော့်လက်ထဲ သူ့အထုပ်တစ်ထုပ်ကျန်သွားခဲ့တယ်....။ အဲတုန်းက အိမ်ကကားနဲ့လိုက်ပို့ပါမယ်ပြောတာ သူကလက်မခံခဲ့ဘူး...။ ခုမှစတွေ့တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို သူမယုံတာ သဘာဝကျပါတယ်လေ...။
ကျွန်တော်နဲ့သူစတွေ့ကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းက ဒီလောက်ပါပဲ... ကျန်တာကတော့ သူဟာ ချောကလက်လုံးဝမကြိုက်ပေမယ့် Mocha Coffee ကိုတော့ စွဲစွဲမြဲမြဲသောက်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိုခါး ဖြစ်လာမယ့် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ဆိုတာ....................။
ဟိုအရင်တုန်းက ကျွန်တော်ဟာ တစ်ယောက်ထဲ နေရတာကို လွတ်လပ်တယ် သီးသန့်ဆန်တယ်လို့ ယူဆထားရာကနေ ခု သူနဲ့နှစ်ယောက်အတူဆိုရင် ဘဝဟာ ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်လေးနက်ပြည့်စုံလိမ့်မယ်လို့ တွေးမိလာခဲ့တဲ့ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော် သူ့ကို ရည်းစားစကားပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်........။
သေချာတာကတော့ မိုခါးဟာ ကျွန်တော့်အတွက်လိုအပ်တဲ့ Soulmate ဆိုတာပဲ....။ ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်ခွန်အားတစ်ခု ....။ ကျွန်တော်တို့အတွက် ❤️ အချစ်ဟာအဓိကကျတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဗျ...။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်ခုန်နိုင်အောင်တော့ သူအမြဲစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်...။ ကျွန်တော်တို့မှာ ခိုင်မာမြဲမြန်တဲ့ တွယ်တာမှုရှိနေတယ်....။ နှုတ်ကပြောစရာမလိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို အလိုလိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်...။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်မှုတွေဟာ တကယ့်ဘဝလက်တွဲဖော်စစ်စစ်...။ ဘာအရောင်အစွန်းထင်းမှ မလိုအပ်တဲ့ပတ်သက်မှုတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့တွယ်ညှိကြတယ်...။ နည်းနည်းတော့ဂျူးဝတ္ထုဆန်ချင် ဆန်သွားလိမ့်မယ် .... ဒါပေမယ့် ဒါဟာဝတ္ထုမဟုတ်ဘူး တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာရှိနေတာ....။ သူဟာ ကျွန်တော့်ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာ ယုံကြည်စွာလိုက်ပါစီးမျောနိုင်တယ်....။ ဒီလိုလက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် မိုက်မိုက်မဲမဲ ထားရစ်ခဲ့ပါ့မလား.....။
တစ်ခုတောင်းပန်ချင်ပါတယ် မိုခါးရေ.... ကျွန်တော် ခင်ဗျားကိုရည်းစားစာပေးတုန်းက နဲနဲပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်သွားတယ်လို့ ခံစားမိလို့ပါ....။ တကယ်တမ်း ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်ဘဝအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ Essential ပါပဲလို့ ပြောပါရစေ....။ ခင်ဗျားကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ကျွန်တော်ပိုသဘောကျတာ လေးလေးနက်နက်ကို နှစ်သက်သဘောကျတာပါ....။ ကျွန်တော်တို့ မတွေ့ဖြစ်တာ နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ...။
Long Time No See.... မိုခါး ...... လို့နှုတ်ဆက်ရင်း .....
သူ့ဆီက တုန့်ပြန်လာမယ့် စကားလုံးတွေကို ကျွန်တော်ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်လိုက်ဦးမယ်.... :)
Note: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက ခုလိုပဲ မေ(၂၅)ရက်နေ့မှာတင်ခဲ့တဲ့ မိုခါး ပို့စ် အဆက်လေးပါ...။ မဖတ်ရသေးသူများအတွက် အပေါ်က အရောင်ခြယ်ထားတဲ့မိုခါးကိုကလစ်လုပ်ပြီး သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်...:)
Posted by Cameron at 11:13 No comments:
နမောဿတ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုသတ္တာ
ပူဇော်သမျှကိုခံယူတော်မူထိုက်သော အလုံးစုံသောတရားတို့ကို မဖောက်မပြန်
အရူပါဝိစရစိတ် = ၁၂ ပါး
စိတ်ပိုင်း(၁) မှာတုန်းက အကုသိုလ်စိတ်(၁၂) အကြောင်းကို ပြောပြပြီးပြီမို့ (၂) မှာ အဟိတ်စိတ်(၁၈)ပါးကို ကျွန်မ ဖတ်မှတ်သလောက်လေး ရေးပြချင်ပါတယ်...။
အကုသလဝိပါတ်စိတ် = ၇ ပါး
အဟိတ်ကုသလဝိပါတ်စိတ် = ၈ ပါး
အဟိတ်ကြိယာစိတ် = ၃ ပါး
စုစုပေါင်း ၁၈ ပါး
အဘိဓမ္မာစိတ်ပိုင်း(၂) တုန်းက ကျန်နေသေးတဲ့ အဟိတ်ကြိယာစိတ် (၃) ပါးကို ဆက်ပြောပြပါမယ်....။
၁) ဉပေက္ခာ သဟဂတ ပဉ္စဒွါရာဝဇနစိတ်
၂) ဉပေက္ခာ သဟဂတ မနောဒွါရာဝဇနစိတ်
၃) သောမနဿ သဟဂတ ဟသိတုပ္ပါဒစိတ်
ဉပေက္ခာ သဟဂတ ပဉ္စဒွါရာဝဇနစိတ်
အလည်အလတ်ဝေဒနာရှိတဲ့ အာရုံဆင်ခြင်စိတ်ဆိုတော့ မျက်စိ နား နှာခေါင်း လျှာ ကိုယ်ဆိုတဲ့ တံခါးပေါက်မှာ ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့စိတ်ပါ...။ နှင်းဆီပန်းလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါ သီချင်းသံလေးကြားလိုက်ရတဲ့အခါ ခရေပန်းရနံ့လေးရလိုက်တဲ့အခါ လျှောက်သီးစားလို့ချဉ်တဲ့အခါ အိစက်တဲ့ဖဲမွေ့ယာပေါ်မှာ အိပ်မိတဲ့အခါ သူက သက်ဆိုက်ရာ တံခါးပေါက်ဘက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်တာပါ...။ Five Sense-door adverting consciousness, accompanied by difference လို့ပြန်ပါတယ်....။
ဉပေက္ခာ သဟဂတ မနောဒွါရာဝဇနစိတ်
မနောဆိုတာ စိတ်၊ ဒွါရဆိုတာ တံခါးဖြစ်လို့ စိတ်တံခါးမှာဖြစ်တဲ့ အာရုံဆင်ခြင်စိတ်ပါ...။ စိတ်တံခါးဖြစ်လို့ တကယ်မြင်တာမျိုးကြားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကဖြစ်ရပ်လေးတွေကို ပြန်မြင်ယောင်ပြီး အတွေးထဲပေါ်လာတာမျိုးပါ...။ အာရုံငါးပါးနဲ့မဆိုင်တဲ့ စိတ်တံခါးမှာဆင်ခြင်တာဖြစ်လို့ Mind door adverting consciousness accompanied by difference ဆိုပြီး မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်....။
ဒီနေရာမှာ မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ်ပါ....။ သူက ငါးဒွါရမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်...။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ ခုနလို ဆင်ခြင်တဲ့အနေမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲ ဝုဌောဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်စိတ်အနေနဲ့လုပ်ပေးပါတယ်...။ နားလည်လွယ်ကူအောင် လူတစ်ယောက်တည်းက ဌာနနှစ်ခုကို ကိုင်သလို အလုပ်နှစ်ခုလုပ်ပါတယ်...။ ပဉ္စဒွါရာနဲ့ မနောဝဇ္ဇန်းကိုတွဲပြီး အာဝဇွန်းဒွေး two adverting consciousness လို့ခေါ်တယ်...။ သူတို့နှစ်ခုဟာ ကုသိုလ်, အကုသိုလ် မဟုတ်လို့ အဗျာကတတွေပါ...။ သူတို့မှာ အာရုံနဲ့ဝတ္ထုဆုံဆည်းတဲ့စွမ်းအားနဲ့ အလုပ်လုပ်နဲ့ ကြိယာ functional သဘောသာရှိလို့ ကြိယာအဗျာကတ လို့ခေါ်ပါတယ်....။
ဘဝင်စိတ်, သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းနဲ့ သန္တီရဏတို့က ဝိပါတ်အဗျာကတတွေဖြစ်တယ်...။ သူတို့က ကံ ကံ၏အကျိုးဝိပါတ်စိတ်တွေမို့ ဝိပါတ်အဗျာကတတွေပါ....။
သောမနဿ သဟဂတ ဟသိတုပ္ပါဒစိတ်
ဟသိက ပြုံးရယ်တာ ဉပ္ပါဒက ဖြစ်စေတာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရာမို့ ဟသိတုပ္ပါဒဆိုတာ ပြုံးရယ်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်သောစိတ် smiling consciousness ကိုပြောတာပါ...။ ဒီနေရာမှာ ပြုံးရယ်တယ်ဆိုကတည်းက ဉပေက္ခာနဲ့ ရယ်လို့မရသလို ဒေါမနဿနဲ့လည်း ရယ်လို့မရတာမို့ ဘုရား ရဟန္တာတွေပြုံးရယ်တဲ့အခါမှာ သောမနဿသဟဂုတ် ဟသိတုပ္ပါဒစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်....။
အရိယာနဲ့ ပုထုဇဉ်မှာ ဒီစိတ်မဖြစ်ပါဘူး....။ လူတွေမှာ ဘယ်လိုစိတ်တွေနဲ့ပြုံးရယ်လဲဆိုရင် စကားပြောတဲ့အခါ လောဘမူသောမနဿ ဒါမှမဟုတ် ကာမဝစရ ကုသိုလ်သောမနဿနဲ့ရယ်ပါတယ်...။
အကုသိုလ်စိတ် (၁၂)ပါးနဲ့ အဟိတ်စိတ် (၁၈)ပါးပေါင်းရင် အပါး(၃၀) သူတို့ကို အာသောဘန ဒါမှမဟုတ် မတင်တယ် မလှပသော စိတ်များ Inelegance mind လို့ခေါ်ပါတယ်....။
စိတ်(၈၉) မှာ အခုအပိုင်းသုံးမှာ ကာမဝိစရစိတ်(၅၄)ပါးထဲက အပါး(၃၀)ထိရောက်သွားပါပြီ....။ ဆက်ပြီး ဝီထိစိတ် နဲ့ ဘဝင်စိတ် အကြောင်းလေးနဲနဲပြောပြချင်ပါတယ်....။ လူတွေမှာ မွေးဖွားလာတဲ့အခါကစပြီး သေဆုံးတဲ့အထိ စိတ်တွေမှာ ဘဝင်စိတ်နဲ့ ဝီထိစိတ်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်...။ အဘိဓမ္မာအရ ဘဝင်ဆိုတာ ဘဝင်္ဂဆိုတဲ့ ပါဠိဝေါဟာရကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ....။ ဘဝရဲ့ ရှင်သန်နေမှု ဒါမှမဟုတ် ကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့ အရှိန်မပျက်သွားနေတဲ့ စိတ်ကို ဆိုလိုတာပါ....။ လူတွေမှာ ပဋိသန္ဓေစပြီး ဖြစ်တဲ့စိတ် အိပ်ပျော်နေစဉ်ဖြစ်တဲ့စိတ် နောက်ဆုံး ဘဝကူးခါနီးဖြစ်တဲ့ စိတ်တွေအားလုံးဟာ ဘဝင်စိတ်တွေပါပဲ...။ ပဋိသန္ဓေစိတ် ဘဝင်စိတ် စုတိစိတ် လို့ခေါ်ပေမယ့် တစ်မျိုးထဲပါပဲ....။
အလွန်ငြိမ်သက်သိမ်မွေ့လို့ ဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေတာကို သိဖို့အတော်ခဲယဉ်းပါတယ်....။ Subconscious or subtle mind လို့ တချို့ပြန်ကြတယ်...။ အေးဆေးငြိမ်သက်တော့ စာအုပ်ထဲမှာ အပြာလိုင်း blue line အနေနဲ့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်....။ ဝီထိစိတ်က ပင်လယ်ပြင်က လှိုင်းလုံးတွေလို လှုပ်ရှားတက်ကြွနေတဲ့ သိစိတ်အစဉ်မို့ အနီလိုင်း red line အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတယ်...။
ဆိုင်ရာအာရုံအလိုက် သဇင်ပန်းလေးတွေ မြင်တဲ့အခါ ခရေပန်းရနံ့ရတဲ့အခါ သီချင်းသံကြားတဲ့အခါ မြင်စိတ်ကြားစိတ်ရနံ့သိစိတ်တွေဟာ တချိန်တည်းတပြိုင်တည်းမြင်တာ ကြားတာ သိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သူ့အစဉ်အတိုင်းသွားနေတာမို့ ဝီထိအစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်...။ စိတ္တနိယာမအရ တစ်ချိန်တည်းမှာ စိတ်နှစ်ခုဟာ တပြိုင်နက်ထဲဖြစ်ရိုးထုံးစံမရှိလို့ တစ်စိတ်ချုပ်ပြီးမှ တစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်....။ အိပ်ပျော်သွားတဲ့ အခါ ဝီထိစိတ်တွေမရှိတဲ့အခါ ဘဝင်စိတ်တွေကြားခံ bufferအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်...။
အိပ်ပျော်နေခိုက် အာရုံအသစ်ဝင်လာတာနဲ့ မနောဒွါရဆိုတဲ့ ဘဝင်စိတ်က တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်....။ ဒီနေရာမှာ မနောဆိုတာ စိတ် ဒွါရဆိုတာက တံခါးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရလို့ ဘဝင်စိတ်တံခါး mind door အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးတာမို့ လူမှာ မျက်စိ နှား နှာခေါင်း လျှာ ကိုယ် အပြင် စိတ်ဆိုတဲ့ တံခါးပေါက်ရှိပါသေးတယ်....။
ဉပမာ မြင်သာအောင်ပြောရရင် နေ့ခင်းတရေးအိပ်တဲ့အခါ ဘဝရဲ့ မပြတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ ဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်...။ ဒီအချိန်မှာ တယောက်ယောက်က တံခါးလာခေါက်ရင် ဘဝင်စိတ်အစဉ် ပြတ်စဲသွားပြီး အကြားအာရုံကြောင့် ဝီထိစိတ်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်...။ ဒါပေမယ့် ပြင်ပအာရုံတစ်ခုခုဝင်လာလို့ ဘဝဖြစ်စဉ်ပြတ်တဲ့အခါ ရုတ်တရက် ထိခနဲမပြတ်ဘူး ပြေးနေတဲ့ သူဟာ ရုတ်တရက် အပြေးရပ်လိုက်ရင် တိခနဲမရပ်နိုင်ဘဲ ခြေတလှမ်းနှစ်လှမ်းလွန်ပြီးမှ ရပ်လို့ ရသလို ဘဝမှာလည်း ပြင်ပအာရုံဝင်လာရင် ဘဝမှာလည်း ပြင်ပအာရုံဝင်လာရင် ဘဝင်စိတ် နှစ်ခါလောက်ဖြစ်ပြီးမှ ပြတ်သွားပါတယ်....။
ပထမဆုံး ဘယ်လိုအကြားအာရုံမျိုးပါလိမ့်ဆိုတဲ့ အာရုံဆင်ခြင်စိတ် ပဉ္စဒွါရာစဇ္ဇန်းပါ....။
ဒီတစ်ခါ တကယ်မြင်တာမျိုးကြားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အတိတ်နဲ့အနာဂတ်က သတိရအောက်မေ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်လေးတွေစိတ်ထဲ ထင်မြင်လာတာကို မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းလို့ခေါ်တယ်...။ (Consider and inquire into mind door or sixth sense door)
အာရုံတံခါးကိုဖွင့်လိုက်လို့ အသံကိုသဲသဲကွဲကွဲဆင်ခြင်မိတဲ့အခါ ကြားစိတ် Ear Consciousness ဖြစ်လာပါတယ်...။ ဆက်တိုက်ဆိုသလို အကြားအာရုံကို လက်ခံတဲ့အခါ လက်ခံစိတ် သမ္ပဋိစ္ဆိုင်း Receiving Mind ဖြစ်လာတယ်...။ လက်ခံပြီးရင် စုံစမ်းရမှာမို့ အာရုံစူးစိုက်စိတ် သန္တီရဏ Investigating Mind ဖြစ်လာပါတယ်...။ စုံစမ်းပြီးရင် ဆုံးဖြတ်ရမှာ သူ့နောက်မှာ တံခါးခေါက်သံပဲဆိုတဲ့ အာရုံဆုံးဖြစ်စိတ် ဝုဌော Deciding Mind ဆက်တိုက်ဖြစ်လာပါတယ်...။ ဝုဌောပြီးရင် တံခါးခေါက်သံကို ထိတွေ့ခံစားတဲ့ အရှိန်အဟုန်ပြင်းတဲ့ ဇောစိတ်တွေ ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်လာပါတယ်...။ သူ့နောက်မှာ ဇောစိတ်ရဲ့ အာရုံကိုဆက်လက်ခံစားတဲ့ တဒ္ဒါရုံစိတ်နှစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်...။
ဇောဆိုတာ ဇဝနဆိုတဲ့ ပါဠိစကားကဆင်းသက်လာတာပါ...။ သူက အရှိန်အဟုန်နဲ့ အားရှိတဲ့ သဘောကို ဆိုလိုပါတယ်...။ နှေးတာမြန်တာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘဲ အရှိန်အဟုန် Momentum ရှိတဲ့ သဘောကိုပြောတာပါ...။ တဒ္ဒါရုံက ဇောရဲ့ အာရုံကို ဆက်လက်ခံစားတာပါ...။ နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် အရသာရှိတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲကို ဇောစိတ်တွေနဲ့ စားသောက်ပြီးရင် တဒါရုံနဲ့ အဲဒီအရသာကို ဆက်လက်ခံစားနေတဲ့ သဘောပါ....။ လူ့ဘဝသက်တမ်းမှာ လှုပ်ရှားနိုးကြားတဲ့ ဝီထိစိတ်နဲ့ အေးချမ်းပြီး ငြိမ်သက်တဲ့ဘဝင်စိတ်က တစ်လှည့်စီဖြစ်နေပါတယ်....။
ဝီထိစိတ် = လှုပ်ရှားနိုးကြားတဲ့စိတ်
ဘဝင်စိတ် = အေးချမ်းငြိမ်သက်တဲ့စိတ်
ဝုဌော = အာရုံဆုံးဖြတ်စိတ်
မှတ်ချက်။ ။ ခွဲစိတ်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစိန်လင်း၏ ရွှေစင်မြင်းမိုရ်အဘိဓမ္မာစာအုပ်မှ ကောက်နုတ်ပါသည်...။ ကျွန်မလေ့လာပြီးသလောက် မှတ်သားထားသည်များကို သဘောပေါက်လွယ်အောင် အပိုင်းခွဲပြီး ဆက်လက်ရေးသားဖော်ပြပေးပါဦးမယ်....။ ဓမ္မလက်ဆောင်စာအုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဉီး------ကိုလည်း ဒီပို့စ်နဲ့ကျေးဇူးတင် ကန်တော့လိုက်ပါတယ်...။
Posted by Cameron at 10:54 No comments:
ကိုမျိုးကျော့ စာသားတွေက ကျွန်မနဲ့တော်တော်ဆင်တူလို့ ဒီသီချင်းလေးကိုကြိုက်မိတာ....။ ညဖက် အိပ်မပျော်ရင် ဒီသီချင်းလေးနားထောင်ဖြစ်တယ်....။ တိတ်ဆိတ်တဲ့ညအမှောင်ထဲမှာ အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ တကယ်ဖီးလ်လို့ကောင်းတယ်....။ သာယာငြိမ့်ညောင်းတဲ့ ဂီတသံစဉ်ကိုကြားရခြင်းဟာလည်း (ကုသိုလ်ဝိပတ်စိတ်ထဲမှာပါတဲ့ ဉပေက္ခာသဟဂတ သောတဝိဉာဏစိတ်) ရှေးဘဝကုသိုလ်ကံနဲ့ဆိုင်ပါတယ်...။ ဖတ်မှတ်လေ့လာနေဆဲ အဘိဓမ္မာကို ယူသုံးကြည့်တာ တကယ်တော့ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ အဘိဓမ္မာက လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတင်အကုန်ရှိနေတာ....။ တရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်တော့ ငါစွဲ စွဲတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့...။
ငါ....... သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သူများထက်ပို ခံစားတတ်သလို🎵♬
ငါ....... စကားလုံးတိုင်းကို နူးညံ့စွာ တန်ဖိုးထားတယ်🎵♬
ငါ....... စကားတစ်ခွန်းကို အကောင်းဖက်သာ မှတ်ထားတတ်သလို🎵♬
ငါ....... သူများစိတ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းတတ်တယ်🎵♬
ငါ...... ကြေကွဲကြတယ် ဝတ္ထုတွေ မနှစ်သက်သလို🎵♬
ငါ...... ကြည်နူးရတယ် ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ ပီတိဖြစ်တယ်🎵♬
ငါ......သူများသွားတဲ့ လမ်းများကို သိပ်မသွားတတ်သလို🎵♬
ငါ......သူများ ကဲ့ရဲ့ အပြစ်များနဲ့သူရှာချစ်တတ်တယ်🎵♬
Revolution Will Prevail ......
Posted by Cameron at 14:14 1 comment:
Food Truck လေးတစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.....။ မြန်မာပြည်ကတော့မဟုတ်ဘူး....။ United State, Kansas ပြည်နယ်ကပါ ....။ ဖေ့ဘုတ်နဲ့ ဆိုင်လိပ်စာအပြည့်အစုံအောက်မှာတင်ပေးထားတယ်....။ မီနူးတွေနဲ့‌ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်းအသေးစိပ်ပုံတွေတင်ပေးထားပါတယ်...။ facebook မှာရှာရင် ဆူမိုအရုပ်အစိမ်းရောင်နဲ့ပါ....။ ကျွန်မကတော့ သူ့ ဆူရှီရိုးလ်နဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်တွေကိုကြည့်ပြီး စားချင်နေတာ....။ ဆိုင်ရှင်က ကျွန်မတို့ တခါက ဘလော့ဂါ ကဗျာဆရာ ကိုဖြိုးမောင်မောင်ပါ....။ ဖြိုးကိုတော့ပြောထားတာ ပြန်လာရင် ဒီမီနူးတွေအကုန်ချက်ကျွေးရမယ်လို့...:)
ကျွန်မဘလော့လာဖတ်တဲ့သူတွေ Kansas မှာနေတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မယ် အဲဒါ ဆူမိုဆူရှီဆိုင်လေးကို အားပေးပါလို့ ကြော်ငြာခမရဘူးနော် ဒီတိုင်းမိတ်ဆက်ပေးတာ....။ ဗိုက်ဆာလာပြီ အိမ်ပြန်ထမင်းစားလိုက်ဦးမယ်....။ ဒီနေ့က သက်သတ်လွတ်စားတယ်....။ ဒီပို့စ်တင်ရင်း စားချင်စိတ်တွေဖြစ်လာလို့ ဘရိတ်အုပ်ထားရ...။
Oh!!!!! စားချင်စရာလေးတွေ ဗိုက်တောင်ဆာလာတယ် ကြည့်ပြီး
Announce 📣📣📣 ပြီးခဲ့တဲ့ Feb 1 နေ့ကတင်ထားတဲ့ စာဖတ်သူတွေကို giveaway ပေးရမယ့်သူလေးယောက်ကော်မန့်မှာတွေ့ပါတယ် ...။ နှစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်မအီးမေးလ်ကို လိပ်စာတွေပို့ပေးထားခဲ့ပါတယ်...။ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက် ( ညီမ San San Nwe နဲ့ San Htar Khine) ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်မဆီကို (coralnyo@gmail.com) လိပ်စာအပြည့်အစုံနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပို့ပေးပါနော် ...။ ဒီရက်ပိုင်း ကျွန်မ စာအုပ်တွေကိုသွားဝယ်ပြီး ပို့ပေးမလို့ပါ ....။ ကျွန်မဘလော့ကို အမြဲလာဖတ်ပြီး အားပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ထပ်ပြောပါရစေ....💖💖💖
Posted by Cameron at 14:312comments:
အခြေနေက လူတွေကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်အရူးမီးဝိုင်းနေကြပြီ....။ ကိုယ်ယုံကြည်စွာအပ်နှံထားတဲ့ ငွေတွေကို ပြန်ထုတ်မရ....။ ဇွဲရှိရှိနဲ့ထုတ်ရထားတဲ့သူတွေကျတော့ ပစ္စည်းတွေကောက်ဝယ် အဲလိုအသည်းသန်ဝယ်တော့ ဈေးတွေတက် ကမောက်ကမက်တွေဖြစ် ဗြောင်းကိုဆန်နေတာပဲ....။ ဒီလိုအခြေနေမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေကို ကောင်းလှချည်ရဲ့လို့ မျက်စိစုံလုံးကန်း နားကန်းပြီး ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြဆဲသူတွေကိုလဲ အံ့အားသင့်မိပါတယ်...။
ဆိုတော့ တိုက်ခန်းတွေ ကွန်ဒိုတွေ မြေကွက်တွေလိုက်ဝယ်ကြတယ်....။ ကျွန်မတို့အလုပ်ပြန်ဖွင့်ရတယ်...။ ဒီရက်ပိုင်း အခန်းလာဝယ်သူ လာကြည့်သူအများသားကိုး....။ မနေ့က အလုပ်ကပြန်တော့ အိမ်အောက်မှာ အလုပ်က စီနီယာတစ်ယောက်နဲ့ဆုံတယ်....။ သူကအလုပ်ဝင်တာ နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိဉီးမယ်....။ အလုပ်လုပ်တာတော်ပါတယ် ဒါပေမယ့် လောဘဇောတစ်ခုကြောင့် အလုပ်မှာအလွဲသုံးစားပြဿနာဖြစ်သွားခဲ့တယ် အဲအဖုအထစ်တစ်ခုကြောင့် သူဌေးရဲ့ အယုံအကြည်ကိုမရတော့လို့ ရာထူးချခံရတယ်....။ ခုမှ အသက်သုံးဆယ်ကျော်စွန်းစွန်း ကျွန်မနဲ့အမျိုးတော်ပါတယ် အဲကောင်လေးက...။ အဲဒါကျွန်မလဲတွေ့ရော ကျွန်မကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လာဖက်ထားတယ် ....။ ကျွန်မသူ့ကျောပြင်ကိုပွတ်သပ်ပြီး အားပေးလိုက်ပါတယ်...။ သူ့စိတ်ထဲဘယ်သူမှဖွင့်ပြောမရတဲ့ အစိုင်အခဲတွေကို အရည်ဖျော်ချတဲ့နည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အားငယ်နေချိန်မှာ ခွန်အားတစ်ခုကို‌ ပွေ့ဖက်ခြင်းကတစ်ဆင့် ကျွန်မပေးနိုင်တာလေးတစ်ခုပါ....။
ခုချိန်မှာ စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေး ဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေနေတဲ့အချိန်.....။ လူတွေ အသက်အရွယ်မရွေး စိတ်ကျဝေဒနာကို အလွတ်တကူရနေတဲ့အချိန်....။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို Healing မလုပ်နိုင်ရင် အဲဒီစိတ်က ကိုယ့်ကို အနိုင်ယူသွားတာပဲ....။ ကျွန်မ ကိုးဗစ်-19 ဒုတိယလှိုင်းကတည်းက ထိုင်းစီးရီးတွေတော်တော်များများကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်...။ ခုထိလဲ ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တာတွေကို ကြည့်နေဆဲပဲ.....။ Netflix ကိုဆက်မဝယ်ဖြစ်တော့ကတည်းက ဆိုပါတော့....။ You Tube နဲ့ 3Plus မှာကြည့်ဖြစ်တယ်...။
Thai Actor Got Jirayu Tantrakul
ကျွန်မက မင်းသားဆို အပြစ်အနာစာကင်း အရမ်းကို Gentle Man ဆန် ချောမောနေတဲ့သူတွေထက် ခပ်ရွတ်ရွတ် လူဆိုးပုံပေါက်တဲ့ မင်းသားတွေကိုပိုသဘောကျတယ်..(ဉပမာ ကိုရီးယားမင်းသားတွေ အချောအမောတွေတပုံကြီးထဲမှာ ကျွန်မက ရုပ်ဆိုးပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Hollywood တန်းဝင် မင်းသား လီဗြောင်ဟွန်းကိုမှကြိုက်)..။ Got Jirayu က တကယ်တော့ ခေါင်းဆောင်မင်းသား Main Role မဟုတ်ဘူး သူက ဇာတ်ရံမင်းသား ဒုတိယမင်းသားပေါ့....။ သူ့နေထိုင်မှုပုံစံက တခြားမင်းသားတွေနဲ့ကွဲထွက်တယ်....။ စာအုပ်စာပေမြတ်နိုးတယ် ကျန်းမာရေးလိုက်စားတယ် တရားထိုင်တယ် ပြောရမယ်ဆိုရင် သာမန်ထဲကမဟုတ်တဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆကအစ သူများနဲ့မတူတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့လဲ သူ့ကိုပိုသဘောကျမိသွားခဲ့တယ်...။ ဒါကြောင့် သူ့အကြောင်းတွေ သူ့အင်တာဗျူးတွေတော်တော်များများကို You Tube ကနေအကုန်သွားကြည့်တယ် Instagram မှာ follow လုပ်တယ်...။ ကျွန်မထိုင်းကားတွေကြည့်ခဲ့တဲ့ တောက်လျှောက်မှာ တခါမှသူ့ကားမကြည့်ဖူးခဲ့ဘူး ခုမှ One31 channel မှာ Wed+Thus တစ်ပတ်နှစ်ရက်လွှင့်နေတဲ့ Krachao Seeda ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကို စကြည့်မှသိတာ....။ သူက သရုပ်ဆောင်ရာမှာ ဇာတ်ကောင်ဝင်စားမှုတော်တော်လေးကောင်းတဲ့သူလို့ဆိုရမယ်....။ ဇာတ်ညွှန်း ကျေညက်အောင်ဖတ်တယ် တစ်ရက်စာရိုက်ရမယ့် Scene တွေ ရိုက်ကွင်းမရောက်ခင်မှာ သေချာအိမ်စာလုပ်ခဲ့တယ်....။ Acting Coach နဲ့လည်း ဇာတ်ညွန်းမှာပါတဲ့ Dialogue တွေကို ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်ဟာ ဒီစကားကို ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးနဲ့ပြောတာလဲဆိုတာကအစ အသေးစိပ် လေ့ကျင့်ပြီးမှ သရုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူ....။ အသက်ငယ်ပေမယ့် လောလောဆယ်ကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ ထိုင်းမင်းသားတွေထဲမှာ လေးစားရတဲ့ယောကျာ်းတစ်ယောက်....ပြီးတော့ သူ့အကြောင်းသွားလေ့လာလေလေ သူ့ကိုပိုစိတ်ဝင်စားလေလေပဲ....။ သူ့ရဲ့ နေ့စဉ်နေထိုင်ပြုမူတာတွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေတချို့တော့ သူနဲ့ အားကစားလုပ်တာ တရားထိုင်တာ သူဘာစာအုပ်တွေဖတ်တာတွေလုပ်ကြတယ်....။ အသက်သုံးဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ် Got Jirayu မှာ ဒီနေ့ထိရေးထားခဲ့တဲ့ ဒိုင်ယာရီစာအုပ် (၂၅)အုပ်ရှိတယ်...။ သူ့အင်တာဗျူးတစ်ချို့မှာ သူငယ်စဉ်ကရေးခဲ့တဲ့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတွေတချို့ကို ပရိတ်သတ်ကိုဖတ်ပြတတ်တယ်...။ ယနေ့ထိ စာအုပ်ပေါင်း ရာထောင်ဂဏန်းထိဖတ်ခဲ့ပြီးတဲ့သူတဲ့ လေးစားဖွယ်ရာပါပဲ....။ သူစာအုပ်ဖတ်နည်းက တော်တော်လေး အတုယူစရာပါ...။ သူလည်းစာအုပ်ဖတ်နှေးတဲ့ထဲပါတယ် တစ်အုပ်ကို တစ်ပတ်လောက်ကြာတတ်တယ်....။ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ရင် သီးသန့်မှတ်ဖို့ notes စာအုပ်တစ်အုပ်ထားထားတယ်...။ ဆိုတော့ သူစာအုပ်ဆယ်အုပ်ဖတ်ပြီးရင် သူလိုချင်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းဆီရဲ့ မှတ်ချက်လေးတွေကိုထုတ်နုတ်ထားတဲ့ စာအုပ်ဆယ်အုပ်ထပ်ထွက်လာတယ်...။ သူစာအုပ် အုပ်ငါးရာပိုင်ရင် စုစုပေါင်း notes မှတ်တဲ့စာအုပ်နဲ့ဆို တစ်ထောင်ရှိတယ်...အဲလို....။ သူလည်းပဲ e-book ဖတ်ရတာမကြိုက်တဲ့သူထဲပါတယ်....။ စာအုပ်ကို စာအုပ်အတိုင်း စာရွက်တွေကိုလက်နဲ့ကိုင်ဖတ်ရတာ နှစ်သက်တဲ့သူ Social Media ကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားလို့ သရုပ်ဆောင်လိုင်းစဝင်တုန်းက လူသိနည်းခဲ့တာကို သူဝင်ခံထားတာတွေ့တယ်....။ ခုမှသာ Instagram မှာ ပရိတ်သတ်နဲ့ live မှာထိတွေ့ရတာ ပုံတွေတင်ရတာတွေကို နည်းနည်းလုပ်လာလို့ ပရိတ်သတ်များလာခဲ့ရတာတဲ့....။ သူကပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်က Gold ဆိုတဲ့ ဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ casting ခေါ်လို့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရသေးတယ် ၁၇မိနစ်စာ....။
စိတ်ခွန်အားလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး Kort Jirayu အကြောင်းတွေကိုပဲရေးတယ်မပြောနဲ့နော်...။ သူ့အကြောင်းလေးသေချာလေ့လာရင် စိတ်ခွန်အားတွေတကယ်ရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လို healing လုပ်ရမယ်ဆိုတာပါသိသွားရတာမို့ပါ....။
ဒီ video clip လေးက Got Jirayu ရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုအကြောင်းပါ ထိုင်းလိုနားလည်ရင် ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်
Posted by Cameron at 22:20 No comments:
လူတွေလဲ ခုတလော စိတ်ဖိစီးမှုတော်တော်များပါတယ် သွားရေး လာရေး စားရေး နေရေး အသက်ရှင်သန်ဖို့အရေးကို တစ်နေ့တစ်နေ့စဉ်းစားရ ရှာဖွေရ စုဆောင်းရ ငတ်တဲ့သူတွေလဲငတ် ဘယ်သူဘာဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဆိုပြီး နှပ်တဲ့သူတွေလဲနှပ်နေကြတာပဲ ကမ်းခြေတို့ဘာတို့သွားပြီး ကိုးဗစ်-၁၉ တွေကိုတောင်ဖြန့်လိုက်ကြသေးရဲ့ ......။
ကျွန်မလည်း လူတွေထဲက လူတစ်ယောက်မို့ အဲဒီဖိစီးမှုကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ဖျောက်ရတယ် ကိုယ့်တစ်နေ့တာ အချိန်ဇယားနဲ့ကိုယ်နေတယ် လုပ်စရာရှိတာလုပ်တယ် စိတ်ခွန်အားအတွက် စာအုပ်နဲ့ဂီတကသာ အားဆေးမို့ သီချင်းတွေနားထောင်ရင်း အိမ်အလုပ်လုပ်တယ်....။ စာဖတ်ဖို့အချိန်ပေးတယ်....။ ခုချိန်မှာ စိတ်ကိုအားဆေးကျွေးဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား....။
ကျွန်မ Joox ကနေပြီး The Zero အဖွဲ့ရဲ့ "ထာဝရတခဏ" သီချင်းလေးကို နေ့တိုင်းနားထောင်ဖြစ်နေတယ်...။ သူ့သံစဉ်လေးက မြူးမြူးလေးနဲ့ စိတ်ခွန်အားတစ်ခုခုတော့ရတယ်လို့ခံစားရတယ် စိတ်ပျော်တယ်ကွာ သိတယ်မဟုတ်လား....။ အဲဒါ နားထောင်ကြည့်ကြည့် ကောင်းတယ်ဆိုတာ လာပြောတာ....။
ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ကြပါ အပြင်ထွက်ရင် Mask တပ်ပါ လက်မကြာခဏဆေးပေးပါ လူအုပ်များတဲ့နေရာရှောင်ပါ....။ လူအုပ်တော့ရှောင်နိုင်ကြသေးမယ်မထင်ဘူး ခုရန်ကုန်မှာ ဘဏ်ထဲကကိုယ့်ပိုက်ဆံပြန်ထုတ်ဖို့အရေး မိုးမလင်းခင်ကတည်းက ကြိုးပမ်းနေကြရတာမို့ နေပူ မိုးရွာမရှောင် တိုးကြိတ်နေကြရတော့ကာ.....။ ဂရုစိုက်ကြပါလို့ပဲ ထပ်မှာချင်ပါတယ်....။
Revolution will previal...💪💪💪
Posted by Cameron at 16:17 No comments:
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ နာဇီဖက်က ရေကာတာကြီးတစ်ခုကို မဟာမိတ်တပ်က သွားဖောက်ခွဲတာ...
မိုင်းတွေအများကြီးကပ်ပြီးဖောက်ခွဲတာ ...ဆယ်ကြီးက မဖြုံဘူး ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲ နောက်ထပ်ခွဲစရာမိုင်းလည်းမပါတော့ဘူး...။
ဒါနဲ့ ဆရာတပည့်တွေအရမ်းစိတ်ဓါတ်ကျသွားပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ နားနေကြတယ် ...။
ဒါပေမဲ့ မိုင်းခွဲတဲ့အသံကတော့ အရမ်းကျယ်ပြီး ဆယ်ကြီးတုံခါသွားတာကတော့ တော်တော်နဲ့မရပ်ဖူး...။
တော်တော်ကြီးကြာမှာတချို့နေရာတွေမှာအက်ကြောင်းတွေစ ဖြစ်လာပြီးရေတွေယိုလာတယ် နောက်တော့ ဆည်ထဲကရေတွေ အားနဲ့ထွက်လာပြီးပြိုသွားရော .....။
သူတို့တောင်မနဲ လွတ်အောင်ပြေးယူရတယ် ...။
ခုလည်း နှစ်ပေါင်း၇၀ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ထုထည်ကြီးက နဲနဲခြင်း စ အက်လာပြီ စိမ့်လာပြီ မကြာခင်ပြိုကျတော့မှာ သေချာပါတယ် ဆိုတဲ့ကြောင်းလေး ပြောပြတာ... ...။
Posted by Cameron at 17:54 No comments:
လူတိုင်းသိသင့်သော သုခ( ၄ )မျိုး
၁။ အတ္ထိ သုခ
“အတ္ထိသုခ” ရှိ ချမ်းသာတဲ့။
ကိုယ့်မှာ စီးပွားဥစ္စာတွေ အဆင်ပြေလို့
စိန်ရွှေ ရတနာတွေ ရှိတယ်။
ကိုယ့်မှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှိတာကို
ဒါကို မြတ်စွာဘုရားက ”အတ္ထိသုခ”
ရှိလို့ ရတဲ့ ချမ်းသာမျိုးတဲ့။
အေး… ရှိလို့ ရတဲ့ ချမ်းသာက
ရှိနေတုန်းမှာ ခံစားရတဲ့ သုခမျိုးပဲ။
၂။ ဘောဂ သုခ
အသုံးပြုရလို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ချမ်းသာကို
“ဘောဂသုခ” လို့ ခေါ်တယ်။
တိုက်ရှိလို့ တိုက်နဲ့ နေရတယ်။
ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ချမ်းသာသုခမျိုး ဖြစ်တယ်။
ခိုင်မာတဲ့ ချမ်းသာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ အဆင်မပြေလို့ ဖြစ်စေ၊
စီးပွားရေး တိုးချဲ့လို့ ဖြစ်စေ
“အာနဏ်သုခ” လို့ ခေါ်တဲ့
အဆင့်မြင့်တဲ့ ချမ်းသာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။
၄။ အန၀ဇ္ဇ သုခ
အပြစ်ကင်းစင် ပျော်ရွှင်ရတဲ့ ချမ်းသာဟာ
လူတိုင်းလူတိုင်း ရကြတာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီချမ်းသာ ၄ မျိုးထဲမှာတော့
အကောင်းဆုံးသော ချမ်းသာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
“အန၀ဇ္ဇသုခ” လို့ ခေါ်တဲ့
🙏 🙏 🙏 🙏 🙏🙏
Posted by Cameron at 07:14 No comments: